Myanmar Express ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်ကလဲ.. ကောလဟာလ များထွက်ပေါ် ~ Myanmar Express
Myanmar Express ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်ကလဲ.. ကောလဟာလ များထွက်ပေါ်
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ကိုယ်စားပြု ဖွင့်လစ်ရေးသားထားတဲ့
မိုးသီးဇွန်း ဘလော့မှာတော့ Myanmar Express ကို နေအောင် နှင့် မိုးအောင် တို့ တည်ထောင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်
ဒီလှိုင်း ဘလော့ တွင် တော့ NLD IT သမားများရဲ့ ဖော်ထုတ်ချက် အရ
အမေရိကား မှ ဇနီးမောင်နှံလို့ ဆိုပါတယ်
ရဲရင့်ငယ် ဘလော့မှာ ၂၀၁၁ တုန်းက ရှာဖွေ တွေ့ရှိထားတာကတော့
ရုရှားပြန် စစ်ဗိုလ်ဟောင်း တစ်ဦးလို့ ဆိုပါတယ်
ဘယ်သူလဲ ၊ ဘယ်ကလဲ ဆိုတာတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် အတိအကျ မသိရတော့ ပါဘူး.. လောလော ဆယ်မှာတော့ ဆွေမျိုးတွေနဲ့တွေ့ဖို့ ဗြိတိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အရင် ကြိုသွားနှင့်တဲ့ ခင်ရွှန်းလဲ့ဝေ နေတဲ့ မြို့မှာ ရှိနေပါတယ်။ တွေ့လိုသူများ အီးမေး ပို့ပြီး ချိန်းဆိုနိုင်ပါတယ် ခင်များ....။
2 June 2012 21:27
ဘ ယ် သူရေးေ ရးအားေ ပးတ ယ်
2 June 2012 21:40
မင်းအခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ... ဆက်ပြီးမပြောနဲ့ ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်နေ..ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်...
great job!i gonna clap for what u did n what u gonna try
2 June 2012 22:47
အတိုက်အခံလို့ အမည်ခံထားတဲ့ ပြည်ပြေးတွေထဲမှာ ထင်ရာမြင်ရာ ပြောတဲ့လူတွေကြီးဘဲ...ဘာမှလည်း ရေရေရာရာ သိတာမရှိဘူး..စဉ်းစား တွေးခေါ်တတ်တဲ့ ဦးနှောက်နည်းလို့လည်းပြည်ပနိုင်ငံကြီးတွေက သူတို့တွေကို ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်သလိုကြိုးဆွဲ ခိုင်းလို့ရနေတာပေါ့
3 June 2012 06:01
ဟဟဟဟဟဟဟဟဟတော်လှချည်လား ဒါနဲ့ တောင် နိုင်ငံကြီးတခုလုံးကိုတည်ထောင်မယ်တဲ့ ဒါလေးတောင်သေချာမသိဘဲနဲ့ များကွာဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
3 June 2012 07:46
3 June 2012 09:21
မင်းတို.ပြည်ပြေးတွေ ရှိတဲ့ နေရာတိုင်း မှာ မင်းတို.ထက် အရင်MEG ရှိတယ်
3 June 2012 11:33
Cheer Myanmar Express! Please don't take risk if not necessary as we want you show in progress for myanmar. Meanwhile please go ahead to defence our country.
3 June 2012 16:31
ကျွန်တော်လည်းဝင်အာမယ်နော် ။ဒီ မြန်မာအိပ်စပက်ကိုတည်ထောင်တဲ့ထဲမှာ ကကကြည်းက ငနဲတွေလည်းပါမယ်ထင်တယ် ။ဒေါ်အောင်စန်းဆုကျည်နဲ့ ဒေးဗစ်လှမြင့်အကြောင်းကိုသိတာ အရင် MI ကသူတွေလောက်သာသိတာ ။ဒီသတင်းရင်းမြစ်တွေကို MI ဖျက်တော့ ကကကြည်းလက်ထဲပါသွားတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ။။။။။ သို့လော သို့လော နဲ့ပါဒါပေမဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူတွေ ရဲ့ Counter Psywarလို့ထင်မြင်မိကြောင်းပါ ခင်ဗျား....။
3 June 2012 21:21
MEG က NLD ရုံးခန်းကနေေ သတင်းတွေ တင်နေတာကွ။ ဟားဟား
မဲဆောက် ကပါဆိုနေ မယုံကြဘူးလား
4 June 2012 22:51
ဘယ်ကဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကောင့်ဘက်မှ ဘက်မလို့ ကျြိုက်တယ်ဗျာ....
5 June 2012 20:44
5 June 2012 21:44
Thank you MEG, for the voice of reason.
6 June 2012 00:06
MEG...ကိုယ့်အထာနဲ့ ကိုယ်နေလေ...ဘာလို့ အနော့်ဆော် ကိုလိုက်လုနေတာလဲ..ခင်ရွှန်းလဲ့ဝေဘာလို့အစိ(မျက်စိဖြစ်သည်..တလွဲမတွေး ပါနှင့်)ပြူးတာလဲ ဆိုတော့အနော်ကစ်လိုက်တာ များသွားလို့ဗျ..လောလောဆယ်တော့ သူလေးဘေးမှာ မောပြီး အိပ်နေတယ်..ပ၀ါမကူ ရေမရှူကြေး ကစားလိုက်ရလို့..ပီးရင် Dချုပ်ဆိုက်ဒ် မှာသွားကြည့်ကြ..အနော်တို့ တိမ်တွေပေါ်မှာ ကဂျားနေတဲ့ videoလေးပေါ့..
6 June 2012 06:24
MEG ကို လေး စား လျှက် ပါ။ ကိုယ့် အ ထာ နဲ့ ကိုယ် နေ ပါ။ဒီ ကောင် တွေ ဘယ် လောက် ခြေရာ ခံ ခံ ဂ ရု စိုက် မနေ ပါ နဲ့ ။ယ ခု အ မှန် တ ရား ဘတ် တော် သား အ ဖြစ် သ တင်း များ ကို ဆက် လက် တင် ပြ ပေး ပါ ဒါ မှ အ မှား တွေ ကို အ မှန် လုပ် နေ တဲ့ မျိုး မ စစ် နိုင် ငံ ရေး သ မား များ ကို ဆုံ မ လို့ ရ မှာဒါ အ ပြင် အင် တာနက် စာ ဖတ် ပရိတ် သတ် တွေ လည်း အ မှန် တ ရား ကို ရှာ ဖွေ လာ နိုင် မှာ --- လေး စား ခင် မင် လျှက်
6 June 2012 14:37
7 June 2012 15:17
Myanmar Express ဘယ်ကဖြစ်ဖြစ် အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ထုတ်ဖော်နေတဲ့ အတွက် အားလည်ပေးတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်။CHEERS ........
7 June 2012 18:32
အင်း IT ခေတ်မှာ ဒါလေးတောင်မဖော်နိုင်သေးဘဲနဲ့ ။ မင်းကိုနိုင်တို့က ဖင်ယားနေတယ် ။ဒါပေမယ့် တွေးစရာရှိတာက ဒေါ်စုကို ကန် တွေက နည်းပညာအကူညီမပေးဘူးဆိုတာထင်ရှားနေသလိုဘဲ။ ဒေါ်စုထောက်ခံသူ ဘလော့ကာများ၊ ဟက်ကာများ ဘာမှမတတ်ကြဘူးလားးးးးး
8 June 2012 20:50
စောက်ရူးတွေ... လိုင်းပေါ်မှာဘဲ ဖင်ခေါင်းကျယ်နေတယ်... သတ္တိရှိရင် အပြင်ထွက်ပြောပါလားကွ.....
8 June 2012 22:00
ခု လို ဘာ မှ ခြေ ခြေ မြစ် မြစ် မ ရှိ တဲ. သ တင်း တွေ၊ အ ကြောင်း အ ရာ တွေ ကို အင် တာ နက် ပေါ် မှာ ဆန်. ကျင် ဘက် တွေ က တင် နေ တဲ. အ ချိန် မှာ MEG က အ ချက် အ လက် နဲ. အ ထောက် အ ထား ခုံ ခုံ လုံ လုံ အ မှန် တွေ ကို ဖေါ် ထုပ် ပေး နေ တာ ၊ အ မှန် တ ရား ကို သိ ချင် နေ တဲ. သူ တွေ အ တွက် MEG ကို အား ပေး လျှက် ပါ။MEG ဆက် လက် ပြီး ချီ တက် ပါ။
ဂုဏ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေလည်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဂုဏ်တွေဟာ ဂုဏ်တကာ့ ဂုဏ်တွေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဂုဏ်လို့လည်းပြောလ...
NLD ခေါင်းဆောင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဌဖြစ်နေချိန် ဥပဒေမလိုက်နာသည့် NLD ကိုခြေစုံကန်ခဲ့သော ဒေါ်နော်အုံးလှနှင့်အဖွဲ့ အား အရေးယူ
စစ်တွေမြို့နယ်၌ လက်ပစ်ဗုံးများနှင့် ကျည်ဆန်များတွေ့ရှိ
၂၃.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ မြို့ နယ် အုန်းတောကြီး ကျေးရွာမှ ပလ္လင်ပြင်ထိ လမ်း ဖောက် လုပ်ရေး အဖွဲ့မှ ၄င်းနေ့ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ခွဲခန့်က စစ်တွေမြိ...